National Power News:: मेरो रगत रगतमा अभिनय जागेको छ ; कलाकार केदार न्यौपाने National Power News:: मेरो रगत रगतमा अभिनय जागेको छ ; कलाकार केदार न्यौपाने
बनेपा – काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिका रबिओपि २ मा जन्मनुभएको कलाकार केदार न्यौपाने आज भोलि निकै ब्यस्त हुनुहुन्छ । सानै उमेर देखि कलाकारिता क्षेत्रमा रुचि नराख्ने न्यौपाने ठुलो षंघर्स र मेहनत बाट आज एउटा सफल कलाकार बन्नु भएको छ । सानो उमेर बाट नै गित संगीतमा रुचि राख्ने न्यौपानेले चलचित्रमा समेत अभिनय गरिसक्नु भएको छ । भन्नू हुन्छ मेरो रगत रगतमा अभिनय जागेको छ त्यसैले गर्दा आज यहाँ सम्म छु । एउटा सफल कलाकार बन्न धेरै गार्‍हो छ ठुलो मेहनत र षंघर्स बाट नै एउटा सफल कलाकार बन्न सकिन्छ । कलाकारिता क्षेत्र बाट छोटो समयमा नै चर्चाको शिखरमा पुग्नु सफल हुनु भएको छ । कलाकार केदार न्यौपानेले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ । प्रस्तुत छ काभ्रे बाट प्रकाशित नव क्षितिज साप्ताहिकका लागि अरबिन्द्र गौतमले कलाकार केदार न्यौपानेसँग गरेको छोटो कुराकानी ;
० विजया दशमी पनि सकियो आज भोली के गर्दै हुनु हुन्छ ?
मेरो नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा आउने क्रममा छ । विजया दशमी पनि भर्खरै सकियो र आफ्नो दैनिकी कामहरु पनि चलिरहेका छ्न यसैमा ब्यस्त छु ।
० तपाँईको दशैको कुनै गित थिए ?
हो छ , को आफ्नो बोलको गितमा अभिनय गर्ने मौका पाएको थिए । यो गित निकै चलेको थियो धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको थियो । यस गित सँगै कति बसौ मायाको पिरैमा पनि अभिनय गर्ने अवसर पाएको थिए
० तपाईंको दर्शक श्रोताले तिहारको कुनै गित हेर्न पाउने छन ?
यसमा मेरो कोसिस जारी छ । आशा गरौं तिहारको एउटा कोसिली दर्शक सामु ल्याउने छ ।
सानै उमेर देखि मलाई गित संगित एक दम मन पर्ने क्षेत्र हो । मेरो रगत रगतमा कलाकारिता जागेको छ सानो उमेर देखिनै यस क्षेत्रमा लाग्ने सोच थियो । देश समाज र आफ्नो नाम उच्च बनाउनको लागी समाजको एउटा असल कलाकार भएर चिनियोस भन्ने सोचमामा म यस कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको हु ।
० कसको प्रेरणा बाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भयो ?
मेरो बुबा र दाजु पनि पहिला देखिनै कलाकारिता क्षेत्रमा आवद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरुको प्रेरणा बाट म कलाकारीता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हु ।
० यस क्षेत्र बाट कतिको सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?
यस क्षेत्रमा प्रवेश पश्चात मलाई धेरै भन्दा धेरै दर्शकले चिन्नु भएको छ । त्यसैले म एक दम सन्तुष्ट छु ।
० यस क्षेत्रमा आएको बिकृतीलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यस क्षेत्रमा धेरै प्रकारको र धेरै सोच भएका मानिसहरु हुनुहुन्छ । जसले दुख गरेर लगानी गरेर गित संगित बजारमा सार्वजनिक गरेको हुन्छ उनिहरुले गित संगितबाट राम्रो फल नपाउदा अलि गित संगितमा नकारात्मक असर परेको देख्छु । गित संगितमा लाग्न कै लागी मानिसहरु आफ्नो शरिरलाई नङ्गाउन पनि तयार हुन्छन । यसरी गित संगितमा दिन प्रति दिन विकृती आएको छ ।
० यस क्षेत्रबाट बाँच्न सकिदैन भन्छन् नि तपाई के भन्नु हुन्छ ?
यस क्षेत्रबाट बाँच्न सकिन्छ । मन्छेले गित संगितलाई फुर्सदको समयमा समय सदुपयोग गर्ने एउटा पाटोको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छ्न । यस्तो सोचलाई परिवर्तन गरी गित संगितमा दिन प्रति दिन लागि परेर गित संगिलाई सबै कुरा सम्झने हो भने बाँच्न पक्कै पनि सकिन्छ ।
० कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर कुन कुन संस्थामा कार्यरत हुनु हुन्छ ?
नेपलकै चर्चित एक संस्थाको रुपमा चिनिने राष्टिय लोक तथा दोहोरी गित प्रतिष्ठान काभ्रेको कोषध्यक्ष र काभ्रेलि कलाकार समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाट गित संगितमा आफ्नो कर्तव्य निमारण गर्दै छु।
० तपाँईको अहिले सम्म कति ओटा भिडियो बजारमा छन ?
धेरै गितमा अभिनय गरेको छु । केहि लोक गित केहि चलचित्रहरुमा गरेको छु अहिले सम्म दर्जन भन्दा बढि अभिनय गरेको भिडियो र चलचित्र आएका छन ।
० एउटा कलाकारले अर्को कालाकारको खुट्टा तान्ने प्रवृति छ नि यसलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ?
कलाकार सबै आफ्नो क्षेत्रामा आफै ठुलो र स्वभिमान हुन्छन । तर कोहि कलाकारहरु यस्तो पनि देखेको छु अर्काको डाहा गर्ने र अरुले गरेको राम्रोलाई पनि आलोचना गर्ने र घमण्डि पन देखाउने गर्छन । यस्तो प्रवृतिले चाहि कलाकारहरुमा दोन्द आएको हो ।
० तपाईंको भाबी योजना ?
देश र समाजको समृद्धिको लागि कलाकारिता क्षेत्र बाट समाजमा रहेको बिकृती विसंगतिहरु लाई निरुत्साहित गर्ने सोच छ ।
एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनु होला । एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई उसको सिर्जना हेरेर सम्मान गर्ने हो । जसको सिर्जना राम्रो समाजमा सुहाउदो पच्ने खालको छ भने उसलाई सबैले सम्मान र माया गर्नु पर्छ र सिर्जना हेरेर नै एक अर्काले सम्मान गर्नु पर्छ भन्न चाहान्छु । साथै तपाईं लगायत तपाईंको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।